AirPods enweghị ike ịrụzi dịka iFixit | Akụkọ akụrụngwa
AirPods enweghị ike ịrụzi dịka iFixit si dị
Oge ọ bụla ụlọ ọrụ wepụtara ngwaahịa ọhụrụ na ahịa, ụmụ okorobịa na iFixit na-eme ike ha niile iji nwee ike iwepụ ngwaọrụ ahụ wee hụ ohere nke ịrụkwa ya. Na AirPods enweghị ike ịbelata. Kemgbe Mọnde gara aga, ọtụtụ ndị ọrụ na-anụrị ụtọ isi ekwe ntị Apple ndị a nwere ọnụahịa ahịa nke euro 179 na nke ọtụtụ ndị ọrụ nyeferela gaa na mmekpa ahụ dị iche iche site n'ụzọ ọdịda ma mikpuo ha n'ime mmiri ịlele nguzogide ya. Dị ka anyị hụworo site na iFixit, AirPods enweghị ike idozi ya, yabụ ọ bụrụ na mmebi anaghị ekpuchi akwụkwọ ikike ahụ, ị ​​nwere ike ịme onwe gị ụfọdụ ọla ntị mara mma.
Ozugbo emeghere AirPods ka ọ hụ otu esi arụ ya, ọ gaghị ekwe omume ịrụkwa n'ihi a na-ejikọkwa ọtụtụ ihe mejupụtara, na mgbakwunye na ịgbado ọkụ, karịsịa ihe ndị na-ekpuchi teknụzụ dị n'ime. Mgbe Apple mepụtara ekweisi ndị a, ha chọrọ ka ha weghara obere oghere dị ka o kwere mee, nke mere na ha enweghị ike ịrụzi yana maka ụlọ ọrụ iji nye ha mmemme nnọchi dị iche maka ha.
Ọ bụrụ na anyị tufuo otu n'ime ha ma ọ bụ na ọ kwụsịrị ịrụ ọrụ yana nrụzi anaghị ekpuchi akwụkwọ ikike ahụ, Apple na-enye anyị ohere ịzụta nke onwe, na ọnụahịa nke dollar 75, Ẹkot ke euro erubeghị na Spanish website na nke ahụ bụ ihe karịrị otu izu gara aga na ha bipụtara ozi a na iPhone nkwado website, ebe a pụrụ ịchọta ozi a. Nke a bụ ọtụtụ nseta ihuenyo nke usoro iFixit rụrụ iji chọpụta ma enwere ike idozi AirPod ma ọ bụ na enweghị. Ọ bụrụ na ị chọrọ ile anya karịa onyogho naanị ị ga-agabiga na peeji nke iFixit.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Ngwa » AirPods enweghị ike ịrụzi dịka iFixit si dị
Facebook chọrọ itinye isi ya na pọdkastị site na iji Live Audio
Etu esi enyocha akaụntụ Twitter n'ụzọ dị mfe